Soomaalida iyo isku-rumaynta! – Kaasho Maanka
Alfred Mutua oo ahaa afhayeenka dawladda Kenya xilliyadii 2004 illaa 2012 ayaa waxaa halqabsi u ahayd oo uu ku furan jiray hadalkiisa marka uu saxaafadda la hadlayo oo uu ku hadlayo magaca dawladda, oraah ahayd sidatan; “Najivunia kwa Mkenya” oo macnaheedu yahay “Waan ku faanayaa kiiniyaanimada”. Ujeedkiisu waxa uu ahaa in quluubta iyo dareenka hoose ee dadka Kiiniyaanka ahiba ay degto isla-weynida ay iskula weynyihiin Kiiniyaanimadda. Waxa laga arkayo bulshaduna ay noqdaan wax ku salaysan ama kasoo burqanaya macnaha oraahdaasi.
Waxaa jira wax loo yaqaano “Self-fulfilling Prophecy” taas oo noqonaysa “isku-rumayn” oo ah in wax la odoroso, sida loo odorosayna ay u degto midka ama kooxda laga odorosay quluubtooda illaa dhaqankiisu/dhaqankooda uu waafaqo waxii lagu odorosay sidaasina ay ugu rumowdo wixii lagu sheegay markii hore. Tusaale in qof ama koox dad ahi lagu sheego in ay yihiin kuwo dhib badan, mar walba oo la arkana la yiraahdo kooxdiinu waa ay dhib badan tahay, waxaa hubaal ah in ugu dambayn ay kooxdaasi noqonayso mid dhib badan waayo waxa lagu sheegay ayaa saamaynaya dhaqankooda ugu dambayn waa ay ku rumoobaysaa wixii lagu sheegay oo dhibka ahaa.
Haddii aynu Soomali nahay waxaan afkeena barnay in aan isku calaamadino in aynu nahay bulsho xun. Dhagaheenu kama daalaan maqalka oraahda in aynu nahay dad xun oo aan loo talin karin. Arrintani ayaa sababi karta in aynu isku rumayno xumaanta oo aan ugu dambayn noqono bulsho wada xun. Haddaba aynu iska dayno in aan isku sheegno in aynu dad xun nahay, taas badalkeedana waa in aan ku faraxsanaanaa in aynu Soomaali nahay. Ku faan Soomaalinimada.
QORMO LA XIRIIRTA: Laba-wajiilanimo Diimaysan
W/Q: Gallad Gurxan 18th October 2019